Valentine Day မှာ ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘာလို့ Chocolateလေးတွေ လက်ဆောင်ပေးကြတာလဲ ? – ADS Myanmar Blog
ချစ်သူများနေ့ နီးလာပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူတွေကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ Surprise လုပ်ဖို့ အကြံထုတ်နေကြတဲ့သူတွေများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Valentine Day နေ့တွေရဲ့ မပါမဖြစ် ဇာတ်လိုက် မင်းသား ကတော့ ချော့ကလက်ပါဘဲ……
ဘာလို့ ချောကလက်ကို Valentine Day မှာ ပေးကြတာလဲ? စိတ်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှု အတွက်လား၊ တစ်ခြားဘာ အကြောင်းပြချက်များရှိမလဲ ? Valentine Day မှာ ချောကလက်ပေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းလေးကို www.ads.com.mm ကပြောပြပေးမှာပါ။ သေချာတာကတော့ ဒီလိုမျိုး ချောကလက်ပေးကြတာဟာ အစဉ်အလာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီ….
ချောကလက်ကို ဘုရားက ပေးတဲ့ နတ်သုဒ္ဓာ ဆိုပြီးတော့ အက်(ဇ်)တက် အင်ဒီးယန်း (Aztec Indians) လူမျိုးတွေရှိစဉ်ကတည်းက သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာပါ။ အက်(ဇ်)တက် အင်ဒီးယန်းဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့၁၄ရာစုကနေ ၁၆ရာစုအထိ မီဆိုအမေရိကား ဒေသတွေမှာ ကြီးစိုးခဲ့တဲ့ လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အက်(ဇ်)တက် အင်ဒီးယန်း တွေရဲ့ ခေါင်းဆောင် မွန်တီဇူးမားက ချောကလက်ကို ကာမစိတ်အာရုံကိုနိုးကြားစေတဲ့ အစားအစာလို့တောင် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကတိုက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ခရစ်စတိုဖာ ကိုလံဘတ်စ် (Christopher Columbus) ဟာ ဆိုရင် ချောကလက်ကို အခြားတန်ဖိုးကြီးရတနာတွေနဲ့အတူ စပိန် ဘုရင်မကြီး အစ်စဘဲလား ( Queen Isbella )ထံကို ဆက်သခဲ့ရတဲ့ သမိုင်းတွင်တဲ့ အစားအစာတစ်မျိုးပါ……နောက်ပိုင်းမှာ ချောကလက်ဟာ ဇိမ်ခံ စားစရာ တစ်ခုအဖြစ် ဥရောပ တစ်ခွင်မှာကျော်ကြားလာပြီး အခြားနိုင်ငံ ဒေသ တွေကိုလည်းပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတော့တယ်။
၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်လောက်မှာ ကတ်ဘရီ ညီအကိုဟာ အင်္ဂလန် နိုင်ငံမှာ လူတိုင်းစားသုံးနိုင် တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးတဲ့ ချောကလက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၈၆၁ ခုနှစ်မှာတော့ ရစ်ချက် ကတ်ဘရီ ဟာ အသဲပုံဗူးနဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ ချောကလက်လေးတွေကို Valentine Day အမှတ်တရ အဖြစ် ပထမဆုံးစတင်ရောင်းချခဲ့တာပါ…..ဒါကြောင့်မို့ Valentine Day မှာ ချောကလက်ပေးတဲ့ အစဉ်အလာဟာ အဲ့ဒီအချိန်က စတင်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆ နိုင်ပါတယ်။
Valentine Day နေ့မှာ ချစ်သူကို ချောကလက်ကျွေးတာက ချစ်ခြင်းရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုအပြင် ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကို ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လို့လဲ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ချောကလက်ကို စာသုံးပေးမယ်ဆိုရင်
ချောကလက်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ် အကျိုးပြုတဲ့ ပိုတက်ဆီယမ် ၊ ဇင့် စတဲ့ အဟာရဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင် ပါတယ်
ချောကလက် အမဲ ( Dark Chocolate ) ဟာ ဦးနှောက်မှတ်ဥာဏ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်
စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန် ၊ တစ်ယောက်ထဲ အားငယ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ချောကလက်လေးများစား လိုက်ရမယ်ဆိုရင် စိတ်ကျေနပ်မှု တစ်စုံတစ်ရာရရှိသွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ သင်္ကေတနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ ချောကလက်လေးတွေဟာ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ Valentine Day ရဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင်အဖြစ် တည်ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်….
ခစွသြူမွားနေ့ နီးလာပှီဆိုတာနဲ့ ကိုယြ့ခစွသြူတှကေို လကဆြောငပြေးဖို့ Surprise လုပဖြို့ အကှံထုတနြကှတေဲ့သူတှမွေားပါတယြ။ ဒါပမယြေ့ Valentine Day နတှေ့ရေဲ့ မပါမဖှစြ ဇာတလြိုကြ မငြးသား ကတော့ ခွော့ကလကပြါဘဲ……
ဘာလို့ ခွောကလကကြို Valentine Day မှာ ပေးကှတာလဲ? စိတကြွနပေပြွောရြှငမြှု အတှကလြား၊ တစခြှားဘာ အကှောငြးပှခကွမြွားရှိမလဲ ? Valentine Day မှာ ခွောကလကပြေးဖှစတြဲ့ အကှောငြးလေးကို http://www.ads.com.mm ကပှောပှပေးမှာပါ။ သခွောတာကတော့ ဒီလိုမွိုး ခွောကလကပြေးကှတာဟာ အစဉအြလာတစခြုလိုဖှစနြပေါပှီ….
ခွောကလကကြို ဘုရားက ပေးတဲ့ နတသြုဒျဓာ ဆိုပှီးတော့ အကြ(ဇြ)တကြ အငဒြီးယနြး (Aztec Indians) လူမွိုးတှရှေိစဉကြတညြးက သတမြှတခြဲ့ကှတာပါ။ အကြ(ဇြ)တကြ အငဒြီးယနြးဆိုတာ လှနခြဲ့တဲ့၁၄ရာစုကနေ ၁၆ရာစုအထိ မီဆိုအမရေိကား ဒသတှေမှော ကှီးစိုးခဲ့တဲ့ လူမွိုးတှဖှစေပြါတယြ။ အကြ(ဇြ)တကြ အငဒြီးယနြး တှရေဲ့ ခေါငြးဆောငြ မှနတြီဇူးမားက ခွောကလကကြို လိငစြိတအြာရုံကိုနိုးကှားစတေဲ့ အစားအစာလို့တောငြ သတမြှတခြဲ့ပါတယြ။ အမရေိကတိုကကြို ရှာဖှတှရှေိ့ခဲ့တဲ့ ခရစစြတိုဖာ ကိုလံဘတစြ (Christopher Columbus) ဟာ ဆိုရငြ ခွောကလကကြို အခှားတနဖြိုးကှီးရတနာတှနေဲ့အတူ စပိနြ ဘုရငမြကှီး အစစြဘဲလား ( Queen Isbella )ထံကို ဆကသြခဲ့ရတဲ့ သမိုငြးတှငတြဲ့ အစားအစာတစမြွိုးပါ……နောကပြိုငြးမှာ ခွောကလကဟြာ ဇိမခြံ စားစရာ တစခြုအဖှစြ ဥရောပ တစခြှငမြှာကွောကြှားလာပှီး အခှားနိုငငြံ ဒသေ တှကေိုလညြးပွံ့နှံ့လာခဲ့ပါတော့တယြ။
၁၈၀၀ ပှညြ့နှစလြောကမြှာ ကတဘြရီ ညီအကိုဟာ အငျြဂလနြ နိုငငြံမှာ လူတိုငြးစားသုံးနိုငြ တဲ့စွေးနှုနြးနဲ့ရောငြးခပွေးတဲ့ ခွောကလကဆြိုငတြစဆြိုငကြို ဖှငြ့လှစခြဲ့ပှီး ၁၈၆၁ ခုနှစမြှာတော့ ရစခြကြွ ကတဘြရီ ဟာ အသဲပုံဗူးနဲ့ အလှဆငထြားတဲ့ ခွောကလကလြေးတှကေို Valentine Day အမှတတြရ အဖှစြ ပထမဆုံးစတငရြောငြးခခွဲ့တာပါ…..ဒါကှောငြ့မို့ Valentine Day မှာ ခွောကလကပြေးတဲ့ အစဉအြလာဟာ အဲ့ဒီအခွိနကြ စတငခြဲ့တယလြို့ ယူဆ နိုငပြါတယြ။
Valentine Day နမှေ့ာ ခစွသြူကို ခွောကလကကြွှေးတာက ခစွခြှငြးရဲ့သငျြကတတေစခြုအပှငြ ကိုယြ့ရဲ့ခစွသြူကို ကနြွးမာရေးကောငြးမှနစြခငွေတြဲ့ ရညရြှယခြကွလြို့လဲ ယူဆနိုငပြါတယြ။ ခွောကလကကြို စာသုံးပေးမယဆြိုရငြ
ခွောကလကမြှာ ကိုယခြနျဓာကိုယြ အကွိုးပှုတဲ့ ပိုတကဆြီယမြ ၊ ဇငြ့ စတဲ့ အဟာရဓာတတြှေ ကှယဝြစှာပါဝငြ ပါတယြ
ခွောကလကြ အမဲ ( Dark Chocolate ) ဟာ ဦးနှောကမြှတဉြာဏကြို တိုးတကကြောငြးမှနစြပေါတယြ
စိတညြစနြတေဲ့အခွိနြ ၊ တစယြောကထြဲ အားငယနြတေဲ့ အခွိနမြှာ ခွောကလကလြေးမွားစား လိုကရြမယဆြိုရငြ စိတကြွနပေမြှု တစစြုံတစရြာရရှိသှားမှာပါ။ ဒါကှောငြ့ ခစွခြှငြးမတျေတာရဲ့ သငျြကတနေဲ့ ကနြွးမာရေးအတှကကြောငြးမှနတြဲ့ ခွောကလကလြေးတှဟော နောငနြှစပြေါငြးမွားစှာအထိ Valentine Day ရဲ့ အဓိက ဇာတကြောငအြဖှစြ တညရြှိနမှောပဲဖှစပြါတယြ….
Author hsulattPosted on February 10, 2016 February 11, 2016 Categories Lifestyle, OtherTags Valentine Day မှာ ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘာလို့ Chocolateလေးတွေ လက်ဆောင်ပေးကြတာလဲ ?
Previous Previous post: ပျိုမေတို့စိတ်ဝင်စားမယ့် ပစ္စည်းလေးတွေ…..
Next Next post: ပိတ်ရက်မှာ မိသားစုနဲ့ အမှတ်တရအချိန်လေးတွေကိုဘယ်လိုကုန်ဆုံးမလဲ???